Sina Zon'ny mpamorona voninkazo mena kely ary fampiasam-bola Galaxy Galaxy
Fianakaviana roa miady amin'ny homamiadana, làlan'aina roa. Mitantara tantaram-piainana mafana ity sarimihetsika ity, mieritreritra ary miatrika ny olana farany atrehan'ny olon-tsotra rehetra - alaivo an-tsaina hoe mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra ny fahafatesana, sarobidy indray mandeha monja ny aina noho ny fitiavana, ny hany zavatra tokony hataontsika dia ny mitia sy mankamamy.
Ting Han (1983-11-16) / Mandehana Andriamatoa Tumor (2015) ，World World (2018)，Fotoana voalohany (2012)
Jackson Yee （2000-11-28） / Andro tsara kokoa (2019), Andro lava indrindra any Chang'an (2019), totalin'ny boxe 3,44 miliara
Yuan yuan Zhu (1974-03-18) / Very tany Hong Kong, fitiavana tia fisarahana
A Little Red Flower no andiany faharoa an'ny talen'ny Han Yan ao amin'ny andian-dahatsoratra Life Trilogy. Ny voalohany dia ny dokotera Go Away Andriamatoa Tumor. , tokony hanana fahasahiana hiadiana amin'ny lahatra isika.
Amin'ity indray mitoraka ity dia voninkazo mena kely dia dimy taona hikosohana sabatra, ilay soratra dia nohosorana tsara niaraka tamin'izay, nanasa ilay mpilalao sarimihetsika vaovao tsara indrindra Jackson tamin'ity taona ity, ary nametraka ny rakitra tamin'ny 31 Desambra, ho toy ny asa voalohany amin'ny taona vaovao, ny talen'ny azo lazaina ho be fanina.
Jackson manatevin-daharana ny sarimihetsika amin'ny maha lehilahy azy, .Ny sarimihetsika Better Days dia azo lazaina fa napetraka ho toeran'ilay mpilalao sarimihetsika hery vaovao Jackson, mino aho fa ity sarimihetsika voninkazo mena ity dia hamela azy hahazo bebe kokoa noho ireo mitovy taona aminy.
Raha miresaka momba ny endri-behivavy, raha tsy fantatrao hoe iza i Liu Haocun teo aloha, dia fantatry ny rehetra ny zanakavavin'i Liu mahafinaritra taorian'ny namoahana ny sarimihetsika vaovao Zhang Yimou hoe One Second. Ry olona, ​​tsy tena fahita ny tena natiora. Raha jerena amin'ny tranofiara, efa mihetsika ny fihetsik'i Liu, ary ny lohahevitra momba ny aura an'i Liu dia nanjary tao amin'ny Weibo.
2019- Andro tsara kokoa （1558 tapitrisa）
2015 - Mandehana Andriamatoa Tumor （510 tapitrisa）
Fotoana famoahana: 2020-12-31
Teo aloha: Zon'ny mpamorona sarimihetsika malaza malaza - F9The Saga haingana - Heart Galaxy
Manaraka: Andro tsara kokoa